သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ဆေးထိုးအပ် -> စက်ကို ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ဆေးထိုးအပ်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်ကို ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ဆေးထိုးအပ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
size: 14/90, 16/100, 19/120
Equivalent Systems: 490; 2331; SY7660, 48,51
အဆိုပါဝိသေသ: ဒါဟာအပ်နဖားကိုအမှတ်က Round မှတ်နှင့် BP ရေနံကုမ္ပဏီကအမှတ်2options များရှိပါတယ်။ အဆိုပါ groove လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအပ်နဖားကိုတစ်ခုချင်းစီ stitch.It ၏အရည်အသွေးဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္စက်အသုံးပြုခြင်းအဘို့ဖြစ်၏ဆုံးဖြတ်ရန်မှပဝါမပါဘဲနှင့်အတူဖြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး, ဒါကြောင့်စက်ချုပ်အိပ်ရာခင်းများ, အိပ်ရာဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္နှင့် bedspreads များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 490; 2331; SY7660, 48.51.Good အရည်အသွေး: ကျနော်တို့ဈေးကွက်အတွက်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ .Good ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။
Equivalent Systems: 2331FLG, 490FLG
အဆိုပါဝိသေသ: ဒါဟာအပ်နဖားကိုအမှတ်3options တွေကိုက Round ပွိုင့် BP ရေနံကုမ္ပဏီကမှတ်နှင့် Kn ပွိုင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ groove လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ 180 °ထောင့်ချိုးမှာ Shanks ကတစ်ခုချင်းစီချုပ်များ၏အရည်အသွေးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္စက်အသုံးပြုခြင်းသည် ဖြစ်. , ဒါဟာအပ်ချုပ်အိပ်ရာခင်းများ, အိပ်ရာဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္နှင့် bedspreads များအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 2331FLG, 490FLG.Good အရည်အသွေး။ မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်တိကျသည်။ ကျနော်တို့ဈေးကွက်တွင်တင်းကျပ်တဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ .Good ဂုဏ်သတင်းရှိသည်။